(1) Dị iche iche ekwekọghị & ezi uche factory price.
(2) Omume dị elu & nzaghachi ngwa ngwa n'ime awa 24.
(3) Ihe karịrị afọ 15 na-arụpụta.
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta ọnụahịa emelitere mgbe ị kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma .Ma ọ ga-agwa anyị ihe nlereanya nke ngwaahịa ịchọrọ, mgbe ahụ anyị ga-eziga nkwupụta ahụ.
3.Do i nwere opekempe iji buru ibu? Enwere m ike mix agba?
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwee nke kacha nta na-aga n’ihu. Ọ bụrụ n ’ị na - achọ iregharị mana na ọnụọgụ pere mpe nke ukwuu, anyị na - akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị.
Mix agba na ekwekọghị bụ ok maka anyị.
Olee otú ogologo bụ gị sample ma ọ bụ mmepụta ụzọ oge?
Sample: 3-7 ụbọchị mgbe ihe niile enen.
Mass Production: 7-30 ụbọchị, na-adabere imewe.
Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafere ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
Kedu maka njikwa mma?
A ga-enyocha ngwaahịa niile nke ọma ma anyị bulie ngwaahịa ọ bụla iji zipu nkwenye tupu mbupu. Mgbe ị kwadoro ma nyefee ụgbọ mmiri, anyị hapụrụ ngwaahịa.
Eeh. Anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo nke Analysis / Conformance, Insurance, Mmalite, na ndị ọzọ na mbupụ akwụkwọ ebe chọrọ.
Anyị nwere ike ịga na ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka ị bịa na ụlọ ọrụ anyị oge obula.
Nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ ụlọ akụ anyị: nkwụnye ego 30% n'ọdịnihu, nguzo 70% megide otu B / L.
(1) Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme obere iwu ozugbo ị nwere ike ịga ụlọ ahịa e-shop na Alibaba: https://znsfashion.en.alibaba.com/
(2) Mmadụ Bịa zitere anyị email ma ọ bụ hapụ kọntaktị ozi na anyị maka nnukwu iwu.